Ukraine : Mifanenjana ny samy ngeza
mardi, 01 mars 2022 07:31
Sary ISS fampihaingoana
Nanapa-kevitra ny anasazy ara-bola ny Rosianina ny Amerikanina sy ny Eoropeanina, ka nigiazan'izy ireo avokoa ny vola vahiny banky foibe Rosianina, mahatratra 10 milliara dolara, sy ny fananan'ireo mpanam-bola Rosianina any ivelany.
Nahanton'ny Amerikanina ihany koa ny fahafahan'ny Rosianina misera ara-bola eo anivon'ireo banky iraisam-pirenena.
Nesorin'i FIFA tsy andray anjara amin'ny lalao fiadiana ny tompondaka erantany amin'ny baolina kitra hatao any Qatar ny Rosianina.
Tsy mahazo mandray anjara amin'ireo lalao fiadiana ny tompondaka any Eoropa ihany koa.
Tsy niandry ela moa ny Rosianina namaly ny sazy omena azy, ka dia nesoriny any Guyane ireo injeniera sy mpiasa rosianina, misahana ny fandefasana zana-bolana anabakabaka. Fantatra anefa fa eo ampelatanan'ny rosianina ny fahafahana mampiakatra zana-bolana, ary ny famatsiana sakafo, rano, sy fitaovana ilain'ireo mpanamory sambon-danitra monina eny amin'ny ISS.
Misy aza moa ny fandrahonana ny ampianjera izany zana-bolana sy sambon-danitra izany any Amerika.
Miantehitra amin'ny Rosianina ny Eoropeanina amin'ny fampakarana ireo zana-bolana mandrafitra ny Galileo, izay misahana ny GPS eoropeanina, sy ireo fifandraisana iraisam-pirenena.
Nisy moa ny fihaonana teo amin'ny solotenan'i Ukraine sy Rosia omaly tany Biélorussie, fa nirava maina samy mbola hifandinika amin'ireo mpitondra azy avy.
Mitohy hatrany moa ny daroka ataon'ny Rosianina ary mikasa ny haka ny renivohitry Ukraine ao Kiev ny miaramila antanetin'i Rosianina, fiara mifono vy sy fiara vaventy milahatra efa 60km no tazana miazo any an-toerana. hatreto dia tsy misy manafika sy mahavita midaroka izany lahara-manjohy lava be izany, voafehin'ny rosianina tanteraka ny habakabaka manodidina an'i Ukraine.
Ukraine moa dia faritra tao anatin'ny URSS teo aloha, izay naka ny faleovan-tenany tamin'ny 1991, ka izy tian'i filoha Vladmir Poutine averina atambatra ho iray anatin'ny Firenena Rosianina izao.